नगर–गाउँसभामा मौलिक बिषयमा जोड देऊ - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नगर–गाउँसभामा मौलिक बिषयमा जोड देऊ
Published On : १४ चैत्र २०७४, बुधबार ०७:२९
अहिले धमाधम नगर तथा गाउँसभाहरु हुन थालेका छन् । मंगलबार गोरखा नगरपालिकाको पहिलो विधेयक नगरसभा सम्पन्न भएको छ । जानकारीमा नआएपनि कतिपय गाउँपालिकाका गाउँसभा पनि सम्पन्न भएका होलान् । अथवा कतिपयको हुदैछन् ।
नगर तथा गाउँसभा भनेका स्थानीय तहको भाग्य र भविष्य बनाउने सभा हो । यहाँ नीति निर्माण हुन्छन् । यसअघि राजधानीमा हुने संसद अधिवेशनले नीति निर्माण गरे जस्तै अहिले गाउँ–नगरमै नीति नियम हरु बन्छन् । यसले नै स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । त्यसैले यतिबेला धेरै भन्दा धेरै सचेत, सजग, सुझबुझका साथ बिधेयक प्रस्ताब गर्नुपर्छ । पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पनि सबैले चनाखो हुनुपर्छ ।
धेरैको धेरै स्वार्थ हुनसक्छन् । कतिपय सफा नियतका साथ विधेयक प्रस्ताब गरिएका हुनसक्छन् । कतिपय कसैको स्वार्थबाट निर्देशित पनि हुनसक्छन् । त्यसैले यसमा होश बिचार पु¥याउनु पर्छ ।
विधेयकको नमूना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएका हुन्छन् । झारा टार्नका लागि वा सजिलोका लागि यसमा धेरथोर मात्र काँटछाँट गरी यही विधेयकहरुलाई प्रस्ताब गरिएका पनि हुनसक्छन् । यसो हुनु राम्रो होइन, विधेयकहरु धरातलीय अथार्थतासंग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ ।
गोरखामा पनि हिमालीभेग, उच्च पहाडी भेग, मध्यपहाडी भेग, टार जस्ता भौगोलिक अबस्था छन् । समुदायमा पनि बिबिधता छ । त्यसैले एउटै खालका भन्दा पनि ठाउँ र समुदाय अनुसारका मौलिक मस्यौदाहरु प्रस्ताब हुनुपर्छ । स्वीकृत हुनुपर्छ । यसका लागि धेरैभन्दा धेरै सुझबुझको खाँचो पर्छ ।